people Nepal » आजको राशिफल : असोज २४ गते / अक्टोबर १० तारिख मंगलबार आजको राशिफल : असोज २४ गते / अक्टोबर १० तारिख मंगलबार – people Nepal
आजको राशिफल : असोज २४ गते / अक्टोबर १० तारिख मंगलबार
Posted on October 10, 2017 by Durga Panta
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल आश्विन २४ गते मंगलबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर १० तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथी १४ः५९ बजे सम्म पश्चात षष्ठी तिथी चन्दमा बृष राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु –
बाणीको मधुरताले प्रशम्सित तुल्याउनेछ । तपाईको कार्य प्रतिको लगन सिलताको राम्रो कदर हुने समय रहेकोछ । मानसकि चन्चलताका कारण अध्यन क्षेत्र प्रभाबित रहन सक्नेछ । यात्राका क्षेत्रमा सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेकोले बिशेष सजग रहनु आवश्यक रहनेछ ।
पारीवारका सदस्य हरुबाट टाढाँ भएको अनुभब हुन सक्नेछ । भौतिक साधनको प्रयोग तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहन सक्नेछ । सौर्दयका साधनको खरीद जन्य कार्यमा सामान्य खर्च रहनेछ । नयाँ योजनाका साथ नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्न जिबन साथीको साथ आवश्यक रहनेछ ।
स्वास्थ क्षेत्रको सामान्य तनाब जटिल बन्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । पुराना साथीभाई हरु सगँको भेटघाट रमाइलो साथै खर्च दायक साबित रहनेछ । तपाईको कार्य सम्पादनमा भएको त्रुटिको फाईदा प्रतिपक्षीहरुले सहजै उठाउन सक्नेछन । प्रेम सम्बन्धमा भने समय उत्तम रहेकोछ ।
कला कौशलको प्रस्फुटन द्वारा सबैलाई मोहित बनाउन सकिने छ । मान्यजनहरुको साथ सहयोग मार्फत जटिल कार्य सम्पादन हुनेछन । सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नाले मन प्रशन्न रहनेछ । सबारी साधनको प्रयोगमा साबधानी अपनाउनु उत्तम रहनेछ । बिद्या सफल रहनेछ ।
तपाईको कार्यको फल अरुलाई सहजै प्राप्त हुनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला । बोलिको कारण कुलकुटुम्ब सगँको सम्बन्धमा तिक्तता पैदा हुन सक्ला ।
कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका कार्यहरुमा सफलता हात लाग्नेछन । भोज भतेरमा सरीक हुने अबसर जुट्नेछ ।
अपरीपक्क निर्णयले तपाई लाई गलत साबित गर्न सक्नेछ । अरुको बिश्वास गर्नाले षड्यन्त्रमा फसीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । आफ्नु लापरवाहिले धनमालको क्षति हुन सक्नेछ ।
आफु भन्दा सानोको सहयोगमा गरिएका कामहरु दीगो फाईदा मुलक साबित हुनेछन । सामाजीक कार्यका निम्ति साधारण खर्च हुन सक्नेछ । बिद्या प्राप्तिको योग रहेको छ । सानो प्रयासले ब्यक्तित्व बिकासमा निकै टेवा पूर्याउनेछ । पारीबारिक मनोरञ्जका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ ।
प्रतिश्पदा मुलक कार्यमा तपाई अब्बल रहनु हुनेछ । शुभ चिन्तकहरुको प्रयाप्त साथ प्राप्त हुनाले कार्यसम्पादनमा सहजता रहनेछ । पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।